Ngabe ukuhlanganiswa okukodwa kungcono? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Ibhayisikili lomgwaqo elilodwa elihlangene - izixazululo eziqinile
Ibhayisikili lomgwaqo elilodwa elihlangene - izixazululo eziqinile
Ngabe ukuhlanganiswa okukodwa kungcono?
I-ongashadilengaphambiliuchungechungeizinhlelo zinikeza ezinyekuhleizinzuzo: 1. Isisindo Esilula Khulula okunyeuchungechunge, kodwa nangesiqandisi sangaphambili, ishifter nekhebula. 2.
Iqembu le-Pro lamabhayisikili i-Aqua Blue lisanda kumemezela ukuthi bazosebenzisa amafreyimu ama-3T ngesizini ka-2018. Lokho kwabangela isiphithiphithi. Okokuqala, ngoba amafreyimu anama-disc brakes kuphela.
Ngakho-ke impikiswano. Okwesibili, ngoba awukwazi ukusebenzisa i-derailleur ngayo; ayihlali nje. Ngakho-ke kufanele usebenzise idrayivu eyodwa.
Impikiswano yesibili. Manje abantu abaningi bazibuze ukuthi leli qembu lizokwenzenjani ngempela. Kodwa-ke, umbono wami ukuthi kungenzeka ngokuphelele ukuncintisana emijahweni yobungcweti nge-drive eyodwa.
Futhi ngicabanga ukuthi kungenziwa kanjalo. Kodwa-ke, ngiyabonga ukuthi iningi lenu ngeke libe nentshisekelo yokwazi ukuhamba ne-drive drive engu-1x ngomjaho ngamunye, ngakho-ke ngizodlula ukuthi kungani futhi kungani. Bese ngizokhuluma ngama-gear ratios ukuzijabulisa nje.
Kulungile, ukuzijabulisa nje. Ngiyadlala. Uma ungazi ukuthi yini i-drivetrain eyi-1-speed drive manje, ake ngichaze.
Lapho unochungechunge olulodwa ngakho-ke awudingi i-derailleur. Kepha ukwenza ukuthi igiya lisabalale olidingayo, unekhasethi elibanzi ngokufana ngemuva. Ukuze iketanga lihlale ngokuphepha futhi lingabhampi, udinga i-derailleur yangemuva enomshini we-clutch.
Ukuze ibambe ngokuphepha, udinga nochungechunge olukhethekile, okubizwa ngokuthi yi-chain-wide chainring, nayo ebambe uchungechunge ngokuphepha impela. Manje, izizinda ezihlanganisa uchungechunge olulodwa bezilokhu zikhona iminyaka eminingi. Kepha i-SRAM yethule uhlelo lokuqala lokuzinikela ngamabhayisikili asezintabeni emuva ngo-2012, futhi muva nje nangaphandle komgwaqo ku-gravel naku-cyclocross ngemuva kokwethula i-Force 1 ngo-2015.
Kepha ibuye ibambe nasemigwaqweni. Ngaphambi kokuthi singene ukuthi kungani ungafuna ukusebenzisa idrayivu eyi-1. Ngoba kubagibeli bamabhayisikili abajwayelekile abanjengawe nayo, akunalusizo kangako, futhi kulula ukusetha ngoba konke okumele ukhathazeke ngakho yisici esisodwa.
Kungaba lula futhi, ngokuya ngenhlanganisela eqondile yamaphrokhethi owasebenzisayo. Kubuye kuthule. Akukho ukushaywa ngempama kwamaketanga kunoma yini ecekela phansi kune-asphalt ngoba le-clutch derailleur ibamba uchungechunge endaweni yayo.
Futhi-ke uqobo, ngicabanga nje ukuthi umkhakha wokuxhuma ngaphambili uyinto enhle kakhulu, ehlanzekile kakhulu. Kepha-ke kuba mnandi impela, futhi ngalokho ngiqonde ukuthi yi-geeky ngempela, lapho uqala ukucabanga ngokwakhiwa kohlaka. Ngoba uma ubuyela emabhayisikili asezintabeni abekhona isikhashana, njengoba ngishilo, uma ulahla okokukhishwa kwe-derailleur, uthola inkululeko eningi ngokwakhiwa kwakho kokumiswa.
Kepha okubalulekile kithina, ungenza futhi i-chainstay ibe mfushane ukwenza amabhayisikili asheshe agiye ukuwenza uphile. Yilokho kanye esikwenzile ngebhayisikili langokwezifiso le-GCN. Njengoba ukwazi ukubona, ama-chainstays amafushane ngobuhlanya, kepha ayikho inkinga ngokusebenza kokudlulisa ngoba sisebenzisa indlela eyi-1.
Okufanayo kusebenza kubhayisikili le-Aqua Blue, i-3T Strada. Futhi, leli bhayisikili elilungiselelwe ngamandla anenzuzo eyengeziwe yokususa i-chainring yangaphakathi ne-derailleur okuthiwa ikwenza usheshe. Futhi ngicabanga ukuthi uma ubheka ibhayisikili likaTony Martin's TT, mhlawumbe uthola lowo mbono.
Ngakho-ke uthola ibhayisikili elinokwethenjelwa, elithulile, futhi elisheshayo. Futhi yebo, ngifuna ukugcizelela lelo phuzu. Yize i-SRAM isisize sakha le ndatshana, lona ngumbono wami.
Njengenjwayelo, empeleni ngaso sonke isikhathi lapho ngivula umlomo wami. Ngeshwa. Konke kufanele kusebenza kanjani ngaleso sikhathi? Angikwazi ukukhulumela i-Aqua Blue ngqo, okungenani okwamanje.
Kepha leyo yimfundiso yami. Ake sithi umgibeli wamabhayisikili okhokhelwayo usebenzisa amaketanga angama-53/39 kuma-98% ezinsuku zomjaho. Futhi lokho kuza nekhasethi elingu-11-28 ngemuva.
Ukuphindaphinda ukusabalala ngqo kwamagiya nge-1x, udinga amazinyo angama-50 i-chainring nekhasethi engu-10-36. Ngeshwa, i-SRAM ayenzi ikhasethi elingu-10-36 okwamanje. Babengakwenza lokho ngokuzayo.
Angazi ngempela. Ngakho-ke uma sikhuluma ngokutholakalayo manje, bengingafuna ikhasethi lamazinyo elingu-52 bese ngiya kwelinye lalawo elingamakhasethi ayi-11-36. Ngakho-ke, igiya lakho eliphezulu lincane kancane njalo.
Kepha ukukubeka kumongo, umehluko phakathi kwamakhilomitha angama-59.5 ngehora namakhilomitha angama-60.5 ngehora lapho uhamba ngezinyawo ngo-100 rpm.
Ngingakwazi ukuphila nalokho manje, ikakhulukazi uma futhi ubheka ukuthi kungenzeka yini ukuthi i-aerodynamic Cabanga ngobuhle. Akulula kangako, noma kunjalo. Ngoba abantu abaningi, ikakhulukazi abagibeli bamabhayisikili, bazokhomba ukuthi uma unekhasethi elibanzi, uzoba nokugxuma okukhudlwana phakathi kwamanye amagiya akho.
Okungangakhululeki ikakhulukazi, ikakhulukazi uma uhlafuna isiqu sakho futhi ukhasa kudoti ogcina izinkumbulo zami ezihlala njalo, ake sikubeke ngale ndlela, umsebenzi wami wokuhamba ngebhayisikili. Kodwa uma siyibuka kahle, umehluko phakathi kwaleli khasethi naleli khasethi ungamagiya amabili. Igiya lakho lamazinyo angu-14 negiya lakho lamazinyo angu-16.
Ngabe bashade kangakanani ochwepheshe abanegiya lamazinyo angu-14 no-16? Hhayi-ke, angikhathazi nakancane, kepha angijahi futhi angikazami futhi. Vele kuzoba khona lezo-2% zezinsuku zomjaho ezidinga ukulinganiselwa kwamagiya ngokweqile kulesi simo, ngiyezwa uyabuza. Ngenye yazo.
Kuhlole! Ikhasethi elingu-10-42. Uhlanganisa lokho ne-chain chain engu-48 bese uthola ukusatshalaliswa okufanayo kwamagiya, okungakholeki, u-53/36, okuthe ngobuchwepheshe, khumbula, akuvunyelwe ngisho nokuvunyelwa kuthi ngemuva kube nekhasethi elingu-11-32. Ngokukhulu impela.
Manje-ke ulahlekelwe ezinye izifundo ezimbalwa. Yize ubuyisa imithambo yakho yamazinyo eyi-14 neyi-16, khumbula ukuthi ukuhamba kancane, okungukuthi endaweni enhle kakhulu enezintaba, kukhulu ukweqa okuzodinga kuma-sprocket akho.
Ukujaha kumaDolomites, elinye lawo empeleni kungokwalabo uqobo, njengoba ubona kuleli bhayisikili elenziwa ngokwezifiso le-GCN, ngisebenzisa uchungechunge lwama-50 ngaphambili nale khasethi eli-11-32 ngemuva. Manje lokho kuvunywa kuphela ukuthi kunginika okulingana no-39/23 ngegiya eliphansi, okuyisidala impela, kepha ngithanda kanjalo. Ukube bengihlala eduze isikhathi eside futhi ngikhuphuka ngamandla bengizosebenzisa lena, eyi-11-36, kepha ungesabi osayizi bezintambo abancane; U-46 uzizwa emuhle impela uma uyivula emgwaqeni, futhi uma Ngiphuma emgwaqeni, ngisebenzisa uchungechunge lwama-42; lapho ngigijima emjahweni onqamula izwe, ngisebenzisa i-11-32.
Lapho ngenza imicimbi emikhulu efana neDolomites Superbike noma i-3 Peat Cyclocross, ngisebenzisa lena. Eqinisweni, kunjalo impela. Futhi ngicabanga ukuthi udaka empeleni ludaka oluyi-3 Peat ukuthi luhambo oluyinkimbinkimbi kodwa oluthakazelisa ngokuphelele ngama-gear ratios.
Futhi engicabanga ukuthi ukukugcina engqondweni ukuthi kulula kakhulu ukuthola ukusakazwa okufanayo kwamagiya kusuka ku-1x njengokusetha okungokwesiko okungu-2. Kepha uzoba nezikhala ezinkulu kancane phakathi kwama-sprocket. Ngokwami, lokho akungikhathazi ngempela.
Kepha angikwazi ukukufakazela ngoba angikwenzi. Akusadingeki ukuthi ukhase emiseleni. Yebo! Akukho kuningi.
Ngakho-ke isebenza kanjena. Yini i-hardware ongayidinga lapho? Well okokuqala sinesici esikhethekile sangemuva sangemuva. Ngakho-ke njengoba ngishilo ukuthi ine-clutch kuyo, i-roller-way equkethe ukuhlangana okugcina iketanga lihle futhi livikelekile.
Uma usebenzisa ikhasethi elingu-11-36 uzodinga ikheji eliphakathi nendawo okungu-10-42 lapho-ke uzodinga ikheji lesigaxa eside. Ngemuva kwalokho siba nochungechunge olukhethekile. Njengoba ingakhelwanga ukushintsha, ngokungafani nokushintsha, iphrofayili yamazinyo izoba phezulu kakhulu.
Futhi zishintsha phakathi kokuncanyana nokubanzi ngoba lokho kunikeza ukubamba okuhle, okuphephile ngeketanga kanye nezixhumanisi ezihambisanayo nezincane ngokulingana. Isigwedlo sokuhamba kwesobunxele, esingasasona isigwedlo sokushintsha nhlobo. Eqinisweni, akunjalo, akunjalo? Isigaxa nje samabhuleki.
Ngemuva kwalokho iphuzu elilodwa lokugcina ukubalula. Uma uzosebenzisa le cartridge eyi-10-42, uzodinga eyodwa yalezi ezibizwa nge-XD driver. Futhi ngokuyisisekelo ingena esikhundleni somzimba ojwayelekile we-freehub ngesincane esincane.
Ngoba i-sprocket enamazinyo ayi-11 iyisisekelo esincane kunazo zonke esilingana nekhasethi elijwayelekile. Uma ufuna ukushayela i-10, udinga okuhlukile. Ungasho kuphela ukuthi ingabe iyahambisana yini namabhayisikili akho ebhalansi ngokubonisana nomkhiqizi wakho, noma ngabe ngubani.
Kepha kulokhu ngama-zip, kulula kakhulu. Khipha eyodwa, unamathisele enye emuva lapho. Yebo, ngicabanga ukuthi kuzojabulisa ukuzwa ukuthi yini esendleleni ye-1x elandelayo.
Cishe ngiqagela uhla olubanzi lwama-gear ratios, ukuqala ngalo, nobubanzi bamakhasethi ahlukene, kepha-ke ngicabanga ukuthi akunakugwemeka ukuthi sizothola i-sprocket yangemuva ye-12, isizathu sokuthi ngithi lokhu kungenxa ye- ibhayisikili lezintaba Sesivele silitholile. Uma ungakakwenzi, kufanele ubheke i-athikili ye-GMBN ku-12-speed SRAM Eagle drivetrain ngemuva kokuchofoza umhlaba ukubhalisela ukubheka, yize ngingenasiqiniseko kodwa ukube bengingumbhejisi bengizokufuna. Lapho-ke uma ufuna ukwazi okuthe xaxa mayelana nama-pro gear ratios, futhi angazi ukuthi ngubani ongeke, mane uchofoze lapho ukuze ubone lokho nakho ukubona iTour de France.
Ingabe i-1x drivetrains ikufanele?
Ngakho-ke yikuphi okungcono a1xnoma i-2xukuqhuba? Impendulo emfushane kuya ngokuthi. Kufika ohlotsheni lomgibeli oyiyo nendawo ozogibela kakhulu kuyo. I-2x ikunikeza ububanzi obubanzi futhi ikwenze kube lula ukubhekana nokukhuphuka okuqine, kuyilapho ifayili le-1xkulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi ayithambekele kakhulu kumaconsi eketanga.
Ingabe i-1x ilungele ibhayisikili lomgwaqo?
Ngingakusho lokho umaibhayisikilikuzoba yisipho esizinikezeleibhayisikili lomgwaqo, lapho-ke1xyindlela okufanele uhambe ngayo. Izingxenye ezihamba kancane, ukugcinwa kwamaketanga okungcono, futhi akukho zinkinga zokususwa kwesondo nge-derailleur yangaphambili. Futhi, uma uhlela ukusebenzisa okuthunyelwe,1xkuyintokuhleindlela yokukhulula ishifter ukwenza lokho.13. 2020.
Ngikhetha kanjani usayizi owodwa wochungechunge?
Ibala i-uchungechunge olulodwa(1x) amagiya
Indlela eyisisekelo. Indlela elula kungaba ukufaka ifayela le-1xidrayivu enebanga elifanayo lamagiya njengokusetha kwakho okudala kwe-2x.
11-36 = 3.27 ububanzi (iShimano noma i-SRAM) 11-40 = 3.64 ububanzi (iShimano)
11-42 = 3.82 ububanzi (uShimano)
(whooshing) - Siyakwamukela futhi kwesinye isiqephu se-GCN Tech Clinic lapho sisiza khona ukuphendula nokuxazulula izinkinga zakho zokuhamba ngebhayisikili. Ngakho-ke uma unayo, yishiyele esigabeni sokuphawula kimi futhi ngizokwenza konke okusemandleni ukusiza ukuyiphendula kwesinye seziqephu ezilandelayo. Njengenjwayelo, ake siqhubeke nombuzo wokuqala kaDavid Hall kuleli sonto.
Manje uDavid uthi Hey Jon, Umtholampilo We-GCN Tech uhlale umuhle. Kuhlole ngeposi, David. Manje uDavid David ngineBianchi Via Nirone 7 eneqembu lejubane leSora 9.
Lapho usesha amabhayisikili amasha naku-inthanethi, amabhayisikili amaningi afakwa kuhlu anamagiya ayi-10 noma ayi-11. Ngabe angawasebenzisa la mabhayisikili ngeqoqo lejubane elingu-9? Ngingathanda ukubuza isitolo sendawo samabhayisikili, kepha uhlala eJapan futhi uthi uJon uyazi ukuthi umgoqo wolimi unzima. Yebo, ngiyakwenza ngemuva kohambo lwami lokuya eJapan, kepha ngithole ukuthi wonke umuntu ngaphandle ubelusizo impela.
Kepha ake siyixazulule leyo nkinga-ke, izindaba ezimnandi ukuthi amakhithi weqoqo le-9-speed azolingana nanoma yimaphi ama-hubs we-freewheel ayi-10 noma ayi-11 angikwazi ukucabanga nganoma yisiphi isizathu sokuthi kungani lokhu kungafanele kube njalo. Ongakudinga, noma kunjalo, imvamisa yimvume encane ehamba kuhabhu yamahhala kuqala ngaphambi kokufaka ikhasethi, ngaphambi kokuthi ufake iringi yokukhiya, ngena ngobukhulu obuhlukile. Ngakho-ke woza esitolo sakho samabhayisikili sangakini futhi nginesiqiniseko sokuthi uzokwazi ukuxhumana nolimi lwezandla oluhamba phambili lapho nokuthi uzothola isikhala esifanele.
Zithokozise ngamabhayisikili akho amasha webhalansi. Umbuzo olandelayo uqhamuka ku-playandteach kuleli sonto. Manje i-playandteach isithole ama-brake calipers angama-105 28 mm elungele ukusetshenziswa.
Kodwa-ke, babenezikhathi ezimbalwa zokuphoqeleka lapho amatshe amancane abanjwa khona phakathi kwabashayeli nethayi. Kokunye kube nokuma okungazelelwe. Nginaso iseluleko? Noma ngiyazi ukuthi kungani lokho kungaba ngoba bacabanga ukuthi kufanele kube nemvume eyanele yokushayela la mathayi.
Amathayi empeleni yi-Continental GP4000. I-Playandteach ilinganisela ukuthi zikhudlwana kancane. I-Playandteach nayo ifuna ukwazi ukuthi ikunikeza okuthile? p kubo futhi bonke ndawonye bazame elinye isondo elingu-28mm? Manje leli sondo sekunzima ukulihlola ngaphandle kokubona ibhayisikili futhi uqinisekisa ukuthi zonke izinto zifakwe kahle.
Ngakho-ke kungenzeka ukuthi yi-calipers nezicathulo zebhuleki. Kepha kukhona lapha okufanele kukucabangele, ngokwesibonelo ibhuloho lamabhuleki, ingabe lisondelene kakhulu nesondo? Ngakho-ke ngohlaka oluqinile? Uma kunjalo, inkinga kungaba ukuthi okokusebenza kwangempela kwe-caliper kusondele kakhulu esondweni futhi uma uthola amatshe amancane angazikhuhla kahle kuwo. Ngakho-ke bheka ngokucophelela ngoba akuwona wonke amafreyimu ahambisanayo namathayi angama-28mm, bona ukuthi uthola yini ukuthi labo abashaya izikhali bazama okwehlukile, ungazama kepha ama-4000s kokuhlangenwe nakho kwami ​​nesilinganiso esingu-28mm silinganisa lokho, okushoyo.
ukufaka i-doping egazini ngebhayisikili
Ngakho-ke okokuqala nje bengizobheka ukuvulwa kwangempela okuzungeze umqhele wakho wemfoloko nebhuloho kunxantathu ongemuva. Ngokulandelayo sinoDaniel Jones. Manje uDaniel uthi kunini lapho isikhathi sokufaka izinyo kuketanga olukhulu? Njengamanje ngisebenzisa izinyo elingu-52 kepha bacabanga ukuthi badinga ukuya ku-53.
Manje uDaniel wenza i-Ironman triathlon futhi usegiyeni eliphakeme kakhulu, wehla umqansa futhi uzungeza ngaphezu kwe-110 rpm efulethini, imvamisa engxenyeni yesine encane kunazo zonke ekhasethini. Ngabe kufanele ngishintshe nochungechunge oluncane nami? Ngaleso sikhathi Daniyeli, lona kanye iqiniso lokuthi ubuza lowo mbuzo ngicabanga ukuthi uwulungele. Ikakhulukazi njengoba usho ukuthi kulawa mazwe empeleni uzungeza endaweni ephakeme kakhulu.
Uma unyathela intambo yamazinyo engama-53 izokunikeza nje ukuhamba okushelelayo kancane ngicabanga kulama-descents. Ngisho nasefulethini, lokhu kusho ukuthi ungahle ube se-sprocket yesihlanu ngemuva futhi ngakho-ke kungenzeka ube nochungechunge olubushelelezi kunolwesine, ngakho-ke ungaba nohhafu we-watt noma i-watt yokonga okuthile okufana nalolo chungechunge lwangaphakathi, ngiyazi okuningi Abantu bangancoma ukuthi kusetshenziswe amaketanga kancane impela, impela kuShimano, 53 39 lapho nezinto ezinjengalezo futhi abantu bazothi bazishintshe ngababili ngoba izintambo nezikhonkwane zakhiwe kakhulu, kepha akudingekile nakancane. Ngikwenzile, vele, ukuhlanganisa nokulinganisa amaketanga.
Kulungile, amandla wokushintsha kungenzeka angalungi, kepha nakanjani anele. Futhi kufanele ucabange ukuthi uwashintsha kangaki ama-chainrings. Kulungile, umbuzo olandelayo uvela kuMat Ryan.
UMatt uthi bathathe iFelt B16 njengetshe lokunyathela laya ku-triathlon. Kepha izintambo ezihanjiswa ngaphakathi zibonakala ngathi ziyakhala eceleni kohlaka. Noma yimiphi imibono ukuthi ingakulungiswa kanjani kangcono? Kuwuhlupho oluncane kodwa ngiyaluthanda uma konke sekulungile.
Indoda lapho emva kwenhliziyo yami ngoba kahle, ngiyakuzonda lapho ibhayisikili likhala futhi ngiyakuxolela nawe ukuthi ubamba iqhaza ku-tria thlon siyadlala nje. Kepha-ke kuthiwani ngalokho kukhonkotha okucasulayo, okokuqala, thola ukuthi iyiphi ipayipi engenayo. Mhlawumbe ishubhu lakho eliphezulu noma ishubhu lakho eliphansi.
Mhlawumbe susa ubakaki wakho ongezansi noma okungenani iketanga lakho noma okuthunyelwe kwesihlalo, uhlukanise ikhebula, kepha kufanele sikwenze kanjani lokho? Thola ukugoqwa kwe-bubble, yebo kunjalo. Ngakho-ke kukhanya, akubambi noma kubamba amanzi noma yini efana naleyo futhi ungayinamathisela endaweni yayo futhi uma unenhlanhla ungayihlanganisa ukuze izintambo zakho zikude nengaphakathi langempela lamashubhu wohlaka ukuvimbela lokhu kuduma . Okuthile engikwenzile esikhathini esidlule ngelinye lamabhayisikili ami futhi kuyisixazululo esingaphephile.
NgineCannondale Supersix ka-2015 ene-SRAM Red ne-11 28 cassette. Ngihlela ukuthenga isondo elisha, elilula elizosetshenziselwa ukuqeqesha ekukhuphukeni nasekugijimeni.
Ngifunde ukuthi umshini wangemuva ongasebenzi awusebenzi nekhasethi elingu-11 32, ngabe kunjalo? Ngabe ucabanga ukuthi ingasebenza nabangu-11 30? Kumele ngenzeni? Ngiyabonga abajabuli abavela eBrazilBrazil hey wayefuna njalo ukudlula, kulungile manje bese kwenzenjani-ke? Nginesiqiniseko sokuthi ikhasethi lamazinyo elingu-32 ngeke lilingane ngaphandle kokuthi usebenzisa enye ye-Model-derailleurs ebanzi, kepha bengingaqiniseki ngo-100% ukuthi kufanele ngidlale ngalesi sikulufa se-B-tension ukuze ngilungise lapho isondo eliphambili le-pulley lihlala maqondana nama-sprocket ekhasethi futhi empeleni ufuna ukwehlisa lokho kancane ngalesi sikulufa, kodwa ungasebenzisa ikhasethi engama-32 ngoba umngane wami wenza lokho nje, futhi ubesebenzisa ikhasethi likaShimano , kholwa noma cha, ngokuhambisana. Kepha yebo, kungenzeka kakhulu ukuthi noma yini oyenzayo, uzobe uhlekisa ngalezo zikulufo zamandla kagesi we-B ngakho-ke qaphela lokhu ukuze uthole isifunda esifanelekile. Futhi ngikufisela inhlanhla.
Okulandelayo nguCasey Rutledge. Manje uCasey unenkinga ngebhayisikili lakhe lokuthi abalahli imfoloko bangaphambili badwetshiwe futhi upende usuqalile ukuqhekeka wawa. Bama kanjani lapho bephakamisa imfoloko? Kulungile, uCasey ngaleso sikhathi.
Izinkinga zokupenda, akukaze kube kuhle. Manje bengilokhu ngibonisana nedoti lami lasekolishi mayelana neGMBM ngalokhu futhi ngenhlanhla savumelana ukuthi into engcono kakhulu ongayenza ukuthola i-acetone noma i-swab yotshwala, ukuhlanza abashiya phansi nezindawo lapho upende uhlaselwe khona ukuze wenze kahle impela. Futhi-ke uthola i-nail varnish ecacile bese umane uyipende lapho ukudala uhlobo lwebhuloho phakathi kombala wamanje nezinto ezingekho.
Ngakho-ke, kufanele ivale futhi ivikele upende ekuhlubukeni uqhubekele phambili nezimfoloko zakho. Olandelayo nguLau Hea, othi ukujabulela kakhulu ukubuka lolu hlelo. Kuphephe kangakanani ukusebenzisa i-SRAM Etap rim brake levers nge-TRP disc brake caliper ku-disc frame? Ngabe ikhebuli lizophula ifreyimu? Kulungile, hlola lokhu Manje i-TRP empeleni ifaka kuhlu zonke izintambo zazo kubashayeli nakuma-calipers njengokuhambisana nawo wonke ama-switch shifters laphaya.
Zonke izigaxa zamabhuleki ezentambo emakethe, ngakho-ke uphephile ngawo. Uma uqeda uhlaka lwakho ngokudonsa ikhebula, abukho ubungozi, ngoba noma ikhebula liphuka ligijima ngekhebula elingaphandle, ngakho-ke le ntambo yangaphandle ehlala endaweni imane iyikhebula elingaphakathi elidlulayo. Olandelayo nguStephen Moore.
Manje uSteven uthi banamarimu e-cx18 kuma-Campag record hubs okwakhiwa kwami ​​kwe-Gazelle vintage Bona lokhu, ingabe amapayipi asalungile uma efakwa kabusha? Babukeka besha bengenasibonakaliso sokonakala noma impango. Baneminyaka engama-25 ubudala kodwa basebenzise okuncane kakhulu. Ngiyamthanda uStephen, omunye umthandi wezobuchwepheshe bevintage.
Eqinisweni, u-Eddy Murks, wake waba negumbi elingaphansi eligcwele izibopho ezindala zamapayipi akhula. Kepha njengakho konke, ngemuva kwesikhashana babekwazi ukudlula kahle. Kepha njengoba usho, injoloba ibukeka kahle.
Bacishe babukeke njengabasha. Kepha into engizoyiphawula lapha ngamathayi amadala e-tubular, futhi leyo yinkinga engihlangabezane nayo uqobo, i-baseband isusa ikesi langempela le-tubular. Enye indlela yokuthola ukuthi lokhu kuzokwenzeka yini ukufaka la mashubhu ngalamathayi ayizigaxa angenayo i-glue bese uwafaka ku-PSI yawo ephezulu, bese ubheka i-baseband ukuze uqiniseke ukuthi isanamathele ngokuphelele kwisidumbu sangempela esinamathelayo .
Uma kungenjalo, ngisebenzise okuthile esikhathini esedlule ukukunamathisela esidunjini esenziwe nge-latex. Kubukeka sengathi yenza iqhinga kahle. Abantu abaningi bancoma ukusebenzisa usimende wepayipi, ngokwesibonelo kokunamathela kwakho okuphezulu.
Kepha ngithole ukuthi lokhu kuba nzima kakhulu futhi kuvame ukudala iqabunga elengeziwe elingakusizi ukuthi uhambe kalula ngamathayi ayizigaxa. Ngakho-ke nikeza lokho kuzame futhi ubone ukuthi kusuka kanjani lapha. Nami ngifuna ngempela ukubona leli den endala leGazelle.
Ngimthanda ngokuphelele. Kulungile, umbuzo wokugcina uvela kuSimon Guard kuleli sonto. John, nginebhayisikili eliwela iVitus Energie nge SRAM 1 nge.
Uhlaka lunentambo yangaphakathi yekhebula, kepha njengoba ngimunye, nginezimbobo ezimbili ebhayisikili eligcwalisa udaka. Uxhumane noVitus, abazenzi izikhala. Ngabe unayo i-Idea eyodwa noma uyazi ukuthi ngingakwazi kuphi? uzithenge? Kulungile, Simon, unebhayisikili elincane elihle lapho, kodwa kuzwakala kukuhle ukuthi uphume uyoba muhle futhi ube nodaka. (izibhakela) Right, isixazululo esilula lapha.
Sula lezi zindawo phezulu bese ubeka nje isivikeli sohlaka ngaphezulu kwazo noma i-tape tape, i-Gazer tape, konke lokho okunjalo, kulungile? Ngeke ibukeke isitayela esihle kakhulu, kepha ibhayisikili labahamba ngamabhayisikili, ngakho-ke izogqunywa ngodaka noma kunjalo. Kuzovimba ukuthi udaka lungangeni lapho. Okuthile okwenziwa ngumngane wami, empeleni bagcwalisa lezo zimbobo nge-silicone sealant, uhlobo lwento oyifaka ebhavini noma eshaweni, lolo hlobo lwento.
Qaphela, noma kunjalo, awufaki kakhulu, futhi konke kuhamba kahle. Ufuna ukwazi ukuyikhipha ecaleni, okwenzayo ukubuyela kokukabili ngokusetha. Okokugcina, mhlawumbe ngokweqile, kepha, ngiyathanda ukukulahla lapho.
Uma unomngane noma wazi othile onephrinta ye-3D, mhlawumbe, mhlawumbe, angakwenzela okuthile okufisayo ukungena lapho. Kepha lokho futhi kuzothatha ukuhlelwa okuthile futhi empeleni kudinga ukulinganiswa, ngakho-ke mathupha ngizovele ngivele ngithole lesi sleek, sleek, kahle, mhlawumbe hhayi leso sleek, kodwa duct tape solution, kulungile, sikhona, tech sekwenziwe futhi kwasuswa uthuli, kepha khumbula, uma unenkinga yezobuchwepheshe, ngena ngemvume kusigaba samazwana esingezansi, futhi noma ngabe unesisombululo kunoma iyiphi yalezi zinkinga futhi, kungani ungabasizi? Umngane oswele empeleni ungumngane, akunjalo. Futhi, ungakhohlwa ukuthanda nokwabelana ngale ndatshana nomngani, ungayenzi inkohliso, hlola isitolo se-GCN ku- shop.globalcyclingnetwork.com.
Futhi manje, ukuthola enye indatshana enhle, kuthiwani ngesondlo sangoMsombuluko saleli sonto ezansi lapha.
Kungani amabhayisikili athengiswa ngegiya elilodwa kuphela ngaphambili?
Q: Kunganiamabhayisikilikukhonakuthengiswa ngegiya elilodwa kuphelaphakathingaphambili? Leziamabhayisikiliabizwa nge-1X noma i-OneBY drivelines. Banayokuphelaukuongashadilei-chainring nekhasethi langemuva elibanzi lesilinganiso esibanzi. Inzuzo yabokuyintoukuthi abanayo i-ngaphambiliderailleur noma ishifter.
Yikuphi ukuxhumanisa okufanele ngikusebenzise?
Ngenxa yalokho, futhi njengomthetho ojwayelekile, wenakufanele isebenziseyakho enkuluuchungechungengokuhlangana nama-sprockets amancane asekhasethini lakho, kanye namancaneuchungechungengeziphethu ezinkulu.21.10.2016
Yini engcono i-1x noma i-3X?
Ephakemeintengo ngokuvamile, akuhleikhwalithi1xgroupset ibiza ngaphezu kwe-2x, noma3xuhlelo lwekhwalithi efanayo.Kukhuludrivetrain ukulahleka kwemishini ngenxa ye-chain chain enzima kakhulu (ukugoqelwa phakathi) namazinyo ambalwa okuxhuma kwezinye izinhlanganisela zamagiya.
Kungani i-1x drivetrains ibiza kangaka?
Ama-Fatbikes nawo anokucatshangelwa kwamathayi namaketanga,futhi, ezidaka amanzi.1x izindlela zokushayelakuma-fatbikes enza umqondo omkhulu wokwenza ngcono imvume, kepha bacindezela intengo iphakeme ngenxa yalezi zinto esezibalulwe ngenhla.
Kungani i-1x ithandwa kangaka?
Kubagibeli abaningi, izinzuzo ze-1xNgokushesha kwaba okufanele ukushintshaniswa. Ukushintshwa kulula, iketanga liwa kancane, futhi kugundwa ibhayisikili lakho ngamakhulu amagremu wesisindo. Futhi, ngezingxenye ezimbalwa,1xama-drivetrains anciphise izingqinamba ezenziwa ngomshini futhi ekugcineni azobiza kakhulu, nawo.18. 2020.
Ingabe i-1x drivetrains iyashesha?
I-1X drivetrainisebenza kahle njengo-96.0% futhi ayisebenzi njengo-92.4%. Ngokwesilinganiso kusebenza kahle okungu-95.1%. Lokhu kunqunywe ngokuhlanganisa ndawonyeukuqhubaukuphelelwa ngamandla kugezi ngalinye kwali-11, bese lihlukaniswa ngo-11. Kwenziwa okufanayo nange-2Xukuqhubakusetshenziswa amagiya afanele angu-15 ahlukaniswe ngo-15.5. 2019.
Ingabe akhona amabhayisikili anezintambo ezizodwa?
Amabhayisikili anamaketanga angashadile akukho okusha, yebo - kunezigidi zazo laphaya - kepha iningi lawo aliqondiswanga ikakhulukazi ekusebenzeni. Muva nje, noma kunjalo, i-SRAM yethule izinhlobo ezi-chain ezihlanganisiwe zemigwaqo yazo emithathu yemigwaqo - i-Force, Rival ne-Apex - enamakhasethi abanzi.
Kungani i-1x chainrings ikusasa lokuhamba ngebhayisikili?
Ngokukhethekile, ukushintshela ochungechungeni olulodwa lwangaphambili, olwaziwa njenge-1x ('one-by'), kusho ukuthi ungakuqeda ukufaka iklabishi okungcolile, ukukhweza kanye ne-derailleur enamandla. ‘Kimina njengonjiniyela, isichazamazwi sangaphambili singacasula,’ kusho uGerard Vroomen, ongumsunguli we-Cervélo futhi ongumnikazi wamanje we-Open Cycles.
Yikuphi okungcono kokuxhunywa okukodwa noma ukuhlanganiswa kabili?
Amasistimu wangaphambi kokuxhunywa ngaphambili anikela ngezinzuzo ezithile ezinhle: 1. Isisindo Esilula - Khulula okunye okuxhunywe ngochungechunge, kodwa futhi nasesandleni sangaphambili, ishifter nekhebula. 2. Ukucindezelwa okuncane - Ngaphandle kwe-FD, ishifter, nekhebuli, kuncane okuzolungiswa, futhi kuncane okungahambi kahle.